Mgbaaka oku nke Pacific: Kedu ihe ọ bụ na ihe bụ mkpa ya | Netwọk Mgbasa Ozi
Na mbara ala a, e nwere ebe ihe egwu dị karịa ndị ọzọ ma, ya mere, mpaghara ndị a na-enweta aha ndị ọzọ dị egwu ị nwere ike iche na ọ na-ezo aka na ihe dị egwu karịa. Na nke a anyị ga-ekwu maka ya Pacific mgbanaka nke ọkụ. Fọdụ maara ya dị ka mgbanaka ọkụ nke Pacific na ndị ọzọ dị ka eriri belt-Pacific. Aha ndị a niile na-ezo aka na mpaghara nke oke osimiri a na ebe enwere oke ala na oke ugwu.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe mgbanaka ọkụ Pacific bụ, kedụ njirimara ya nwere na mkpa ọ dị maka ọmụmụ na ihe ọmụma banyere mbara ala.
1 Gịnị bụ Pacific Belt of Fire
2 Olee otú e si kee ya?
3 Belt Pacific nke Ọrụ Ọkụ
Gịnị bụ Pacific Belt of Fire
Na mpaghara a nwere ọdịdị nke akpukponu inyinya ma ọ bụghị gburugburu, a na-edekọ ọtụtụ ihe dị iche iche nke ala na ọrụ mgbawa. Nke a na - eme ka mpaghara a bụrụ ihe dị ize ndụ n'ihi ọdachi ndị nwere ike ịkpata. Belt a O ruru ihe karịrị kilomita 40.000 site na New Zealand ruo n'ụsọ ọdịda anyanwụ dum nke South America. Ọ gafere mpaghara niile nke ụsọ oké osimiri nke Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia na Alaska ma gafere ebe ugwu ọwụwa anyanwụ nke North America na Central America.
Dị ka e kwuru na Efere Tectonic, eriri a na-egosi akara dị n'akụkụ efere dị na Pacific tinyere obere tectonic ndị ọzọ na-etolite ihe a na-akpọ Ala jikọrọ ọnụ. N'ịbụ mpaghara nwere oke ọrụ ala na ugwu mgbawa, ọ dị oke egwu.
Olee otú e si kee ya?
E guzobere mgbanaka ọkụ nke Pacific site na mmegharị nke tectonic plate. Efere adịghị edozi, mana ọ na-aga n'ihu. Nke a bụ n'ihi mmiri ebugharị nke na-adị na uwe ụwa. Ihe dị iche na njupụta nke ihe na-eme ka ha na-agagharị ma na-eduga na mmegharị nke efere tectonic. N'ihi ya, a na-ewepu iwepu centimita ole na ole kwa afọ. Anyị anaghị achọpụta ya na ọkwa mmadụ, mana ọ na - egosi ma ọ bụrụ na anyị enyocha geological oge.
Kemgbe ọtụtụ nde afọ, ngagharị nke efere ndị a emewo ka e nwee mgbanaka ọkụ nke Pacific. Igwe tectonic adabaghị kpamkpam na ibe ha, mana enwere oghere n'etiti ha. Ha na-enwekarị ihe dị ka kilomita 80 wee gafere site na mmiri iyi ndị a kpọtụrụ aha na uwe.
Ka efere ndị a na-agagharị, ha na-ekewapụ onwe ha ma na-adakọ ibe ha. Dabere na njupụta nke onye ọ bụla n’ime ha, otu nwekwara ike imi na nke ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, efere ndị dị n'oké osimiri nwere njupụta dị elu karịa nke kọntinent. Ya mere, ọ bụ ha bụ ndị, mgbe mbadamba abụọ ahụ na-adaba, na-edo onwe ha n'okpuru nke ọzọ. Ntughari a na nkukota nke efere na emeputa ihe omimi nke oma na onu nke efere. Ya mere, a na-ahụta mpaghara ndị a dị ka ndị kacha arụ ọrụ.
Efere oke anyị hụrụ:
Convergent ókè. N’ebe ndị a ka epeepe tectonic na-asọrịta ibe ha. Nke a nwere ike ime ka efere dị arọ karị na nke mpe ọkụ. N'ụzọ dị otú a, a na-eme ihe a maara dị ka mpaghara subduction. Otu efere efere ibe ya. N'ebe ndị a ebe nke a mere, enwere nnukwu ugwu mgbawa n'ihi na subduction a na-eme ka magma bilie site na jikọrọ ọnụ. N'ụzọ doro anya, nke a anaghị eme n'otu ntabi anya. Ọ bụ usoro na-ewe ọtụtụ ijeri afọ. Nke a bụ otú e si guzobe ụdọ ugwu mgbawa.
Oke iche. Ha bụ ndị na-emegide nnọọ convergent ndị. N'ime ndị a efere ndị ahụ nọ n'ọnọdụ nkewa. Kwa afọ, ha na-ekewa ntakịrị, na -emepụta oke osimiri ọhụrụ.
Mgbanwe oke. Na njedebe ndị a, efere anaghị ekewapụ ma ọ bụ sonye, ​​ha na-amị amị ma ọ bụ n'ụzọ kwụ ọtọ.
Ebe ọkụ. Ha bụ mpaghara mpaghara ebe mkpuchi ala nke dị na ala n'okpuru efere nwere okpomọkụ karịa ka mpaghara ndị ọzọ. N'okwu ndị a, magma na-ekpo ọkụ nwere ike ịrịgo n'elu ma mepụta ugwu mgbawa na-arụ ọrụ karị.
A na-ahụ oke oke efere ndị ahụ ebe akụkụ ala na ugwu mgbawa gbakọtara. N'ihi nke a, ọ bụ ihe ziri ezi na ọtụtụ ugwu na ala ọma jijiji na-etinye uche na mgbanaka ọkụ nke Pacific. Nsogbu bụ mgbe ala ọma jijiji na-eme n'oké osimiri ma na-eduga na mbufịt na tsunami kwekọrọ na ya. N’ebe ndị a, ihe egwu a na - abawanye ruo n’ókè nke na ọ nwere ike ibute ọdachi dịka nke ahụ mere na Fukushima na 2011.
Belt Pacific nke Ọrụ Ọkụ
O nwere ike ịbụ na ị chọpụtala, a naghị ekesa ugwu ndị na-agbọpụ ọkụ n’ụwa niile. Dị nnọọ iche. Ha bụ akụkụ nke mpaghara ebe ọrụ ala. Ọ bụrụ na ọrụ a adịghị, ugwu mgbawa agaraghị adị. Ala ọma jijiji na-akpata site na nchịkọta na ịhapụ ike dị n'etiti efere. Ala ọma jijiji ndị a na-apụtakarị na mba ebe anyị nọ n'akụkụ mpaghara Pacific Ring of Fire.
Nke ahu bu mgbanaka oku a Ọ na-etinye 75% nke ugwu ọkụ na-arụ ọrụ na mbara ụwa dum. 90% nke ala ọma jijiji na-emekwa. E nwere ọtụtụ agwaetiti na nnukwu agwaetiti ọnụ na ugwu mgbawa dị iche iche ndị nwere ihe ike na mgbawa. A na-ahụkarịkwa ogige ndị gbawara agbawa. Ha bụ agbụ nke ugwu mgbawa nke dị n'elu efere subduction.
Eziokwu a na - eme ka ọtụtụ ndị mmadụ gburugburu ụwa nwee mmasị na egwu maka eriri ọkụ a. Nke a bụ n'ihi ike ha ji eme ihe dị egwu ma nwee ike igosipụta ezigbo ọdachi ndị na-emere onwe ha.
Dịka ị pụrụ ịhụ, okike bụ ihe na - anaghị akwụsị ịtụ anyị n’anya na enwere ọtụtụ ugwu mgbawa na ihe omumu banyere ihe ọkụkụ Pacific.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Pacific Ring of Fire